Radamel Falcao oo si dareen leh Lionel Messi uga difaacay dhaleeceynta uu helo markuu xiran yahay maaliyadda Argentina. – Gool FM
Radamel Falcao oo si dareen leh Lionel Messi uga difaacay dhaleeceynta uu helo markuu xiran yahay maaliyadda Argentina.
(Brazil) 18 June 2019. Lionel Messi ayaa ka badbaadi waayay dhaleeceyn xoog leh markii ay guuldaro kala kulmeen dhigooda Colombia kulankii furitaanka, balse kabtankii guusha ka gaaray Radamel Falcao ayaa si adag u difaacay xiddiga Balaugrana isagoo si fiican u falanqeeyay sababta uusan masuul uga aheyn guuldarada.
Xiddigii hore Atletico Madrid (Falcao) ayaa qiray in Messi mar walba laga sugo wax weyn, inkastoo uu ku dhibtooday inuu wax muuqda ku sameeyo isagoo xiran maaliyadda qarankiisa, saddex jeer ayuu u hogaamiyay finalada koobka Adduunka iyo Copa America, balse saddexdaba waa ku guuldareystay.
“Hadii uu dhaliyo gool, waxey weydiistaan laba” ayuu yiri Falcao.
“Hadii uu dhaliyo laad xor ah, waxey dhahaan si toos ah ugama dulqaadin darbiga”
“Hadii Argentina lumiso, waxey wax badan ka hadlaan iney tahay qalad uu isaga leeyahay, waa qiimaha ay tahay inuu huro si uu u noqdo xiddiga ugu wanaagsan kubadda cagta”
“Messi wuxuu ku dhawaaday inuu nala gadiyo, waana hubaa inuu labada kulan ee soo aadan sameyn doono” ayuu yiri Falcao oo rajo galinaya Lionel Messi iyo jamaahiirta Argentina.
“Anaga ahaan, kuma aanan fakarin inaan tartamayaasha uga mid nahay kaliya inaan garaacnay Lionel Messi, balse shaqo badan ayaa wali hartay”
Si kastaba Argentina nasiib ayey ku laheed iney barbaro ku dhameysteen Paraguay iyo Qatar oo group-ka kula jira, haddana kaliya hal dhibic laga sarreeyo, waxeyna ku qasban yahiin iney guul helaan kulankooda soo aadan si ay u rumeeyaan rajadooda usoo bixitaanka wareega xiga.
Suarez oo ka hadlay suurtogalnimada ay markale ku midoobi karaan xiddigaha MSN